Rano N-methyl-D-aspartic aspirinina (NMDA) (6384-92-5) - Phcoker
SKU: 6384-92-5 Sokajy: Drug Smart
Rano N-methyl-D-aspartic aspirinina (NMDA) vovoka (6384-92-5) video
Rano N-methyl-D-aspartic aser (NMDA) vovoka (6384-92-5) Description
Ny asidra roapolo N-Methyl-D-aspartic aspirinina (NMDA) dia mitana anjara toerana lehibe ao amin'ny fitsipika neuroendocrine. Mety misy fiantraikany eo amin'ny rafitra endocrine amin'ny endriny izany, indrindra ny fampiroboroboana ny hormone (GH) amin'ny vatana biby mba hampitombo ny GHlevel. Mety hisy fiantraikany eo amin'ny fihanaky ny sigara ihany koa izany amin'ny fampihenana ny ADN amin'ny sela PC12.
Rano N-methyl-D-aspartic aspirinina (NMDA) (6384-92-5) Specifications
Product Name Rano N-methyl-D-asparagine (NMDA) vovoka
Brand Name Rano N-methyl-D-asparagine (NMDA) vovoka
Ny asidra N-methyl-D-asparagoga (NMDA) dia miasa toy ny agonista manokana ao amin'ny mpandray ny NMDA, ary noho izany dia mimeo ny asan'ny neurotransmitter glutamate eo amin'io receptor io. Araka ny fantatsika, ny glutamate dia ny neurotransmitter manaitaitra izay hita ao amin'ny ankamaroan'ny synapses ao amin'ny rafi-pitabatabana ao an-toerana, ary ny pharmacologists dia nanao an'io fihetsika io mba hizaràna karazana glutamate receptors. Satria misy mpitsabo glutamate maromaro, dia azonao atao ny manavaka azy ireo amin'ny pharmacologique miaraka amin'ny fanafody samihafa, ary ny vovobony NMDA dia iray amin'ireo zava-mahadomelina ireo. Mifanohitra amin'ny glutamate, ny NMDA dia mamehy sy manara-maso ny mpandray ny NMDA ihany, ary tsy misy fiantraikany amin'ny solon'ny glutamate hafa.